အသင်းငယ်ကို ရှုံးသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အသင်း ၊ ဝိုင်နယ်ဒမ် ကို ခေါ်ဖို့ အကြံပြုတဲ့ ဂန်းနားဟောင်း တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အသင်းငယ်ကို ရှုံးသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အသင်း ၊ ဝိုင်နယ်ဒမ် ကို ခေါ်ဖို့ အကြံပြုတဲ့ ဂန်းနားဟောင်း တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
မနေ့ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ FA Cup တတိယ အဆင့် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဆော်ဒီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ က ဝယ်ယူ အပြီး ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး ကလပ် ဖြစ်လာတဲ့ နယူးကာဆယ် ဟာ ကိန်းဘရစ် အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် အရေးနိမ့်ပြီး ပြိုင်ပွဲ ကနေ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ရ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲမှာ နယူးကာဆယ် ကစားသမားသစ် ထရစ်ပီယာ ပါဝင် ကစားသွားခဲ့တယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အသင်းပရိသတ်တွေ ကတော့ ရလဒ် အတွက် ဒေါသထွက် ခဲ့ကြပြီး လက်မှတ်ခတွေ ပြန်ပေးဖို့ ဆိုရှယ် မီဒီယာထက်မှာ ရေးသား သွားခဲ့ကြပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ပိုင်ရှင်သစ်တွေဟာ ပွဲအပြီးမှာ အသင်းရဲ့ အဝတ်လဲခန်းထဲ ကို လာရောက်ပြီး ကစားသမားတွေ ကို အားပေး စကားပြောဆို သွားခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အခြား ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပဲလေ့စ် ၊ ဘရိုက်တန် ၊ လက်စတာ ၊ ဘရန့်ဖိုဒ့် ၊ အဲဗာတန် ၊ ဆောက်သမ်တန် တို့ အားလုံး နိုင်ပွဲတွေ ရရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာလည်း ချက်စတာဖီးလ် အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၅-၁ နဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျာမန် ဘွန်ဒစ်လီဂါ မှာတော့ ဒေါ့မွန် ဟာ ဖရန့်ဖွတ် အသင်းကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ဘိုင်ယန် နဲ့ ၆ မှတ် အကွာ ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲ တို့ နိုင်ပွဲ ပြန်ရခဲ့ပြီး ဗလင်စီယာ ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၄-၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ အတွက် ဘန်ဇီးမား နဲ့ ဗီနီဆီယပ် တို့က တယောက် ၂ ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးသွားခဲ့ ကြတာပါ ။
ဘာစီလိုနာ ကတော့ ဂရန်နာဒါ နဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေကျသွားခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာ ဘာစီလိုနာ ဟာ ပွဲ ၂၀ ကစားထားပြီး ၃၂ မှတ် ရရှိ ထားကာ အဆင့် ၁ နေရာက ရီးရဲ နဲ့ ၁၇ မှတ်အထိ ကွာဟလို့ နေခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် က အခြေအနေတွေကြောင့် ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ အေးဂျင့် ဖြစ်သူ ဟော့ဂျ် မန်ဒက်စ် နဲ့ အနာဂါတ် ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးလေး ရက်ဖိုဒ့် ကတော့ အသင်းသားတွေက နည်းပြ ရန်းနစ် အပေါ် လက်မခံကြဘူး ဆိုတဲ့ သတင်း ၊ ယူနိုက်တက် အပေါ် ရက်ဖိုဒ့် က စိတ်ပျက် နေပြီး မပျော်ရွှင်ဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အီယန်ရိုက် ကတော့ PSG မှာ မပျော်ရွှင်ဘဲ အသင်းပြောင်းရွှေ့ ဖို့ စိတ်ကူး နေတဲ့ လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဝိုင်နယ်ဒမ် ကို အာဆင်နယ် တို့ ကြိုးစား ကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဘီ နည်းပြ ဝိန်းရွန်းနီ ကတော့ နယူးကာဆယ် ပိုင်ရှင်ဟောင်း မိုက် အက်ရှ်လေ က ဒါဘီ အသင်းကို ဝယ်ယူမယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် နေမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ ဘာမှ မသိရှိ ထားပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကာဂလီယာလီ နဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ ဒီယေဂို ဂိုဒင် ကတော့ အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး မှာ လာရောက် ကစားမယ့် အကြောင်းကို လာမယ့် ၂ ရက် အတွင်း ကြေညာ သွားမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မင်နဲရိုး နဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်း လိုက်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး ဒီယေဂို ကော်စတာ ကိုတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် အသင်း ၃ သင်း အပါအဝင် အသင်း အများအပြားက ချိတ်ဆက် နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းဟာ ဘရိုက်တန် နောက်ခံလူ ဘစ်ဆိုမာ ကို စိတ်ဝင်စား လာတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် နည်းပြ အယ်လီဂရီ ဟာ နာပိုလီ နဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျတဲ့ ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီး ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အော်ဟစ် ပြောဆိုခဲ့မှု အတွက် ၁ ပွဲ ကြီးကြပ်ခွင့် ပိတ်ခံ ခဲ့ရကာ ပေါင် ၈၃၀၀ ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင် ရမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အယ်လီဂရီ ဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ရိုးမား နဲ့ ပွဲ ကို ကိုင်တွယ်ခွင့် ရရှီတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
Previous Article လီဗာပူးတို့ ပထမဦးစားပေး ခေါ်ယူသွားသင့်တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
Next Article ဘာစီလိုနာ ကစားသမားဟောင်းတွေထဲက နေရာအလိုက် အကောင်းဆုံး ၄ ဦးကို ရွေးချယ်ရာမှာ မက်ဆီကို ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့ ဒါနီအဲဗက်စ်